Nagarik News - कता छिन् सबिना?
पहिलो फिल्म 'दुलहीरानी' मा अनुबन्ध हुँदाताका सबिना कार्कीको प्रशंसा धेरैले गरेका थिए। गोरो छाला, पोटिलो ज्यान आदि नेपाली फिल्मकी हिरोइनमा हुनुपर्ने योग्यता उनमा थिए। 'दुलहीरानी'पछि अर्को फिल्म 'एटिएम' मा पनि काम गरिन् उनले।
उक्त फिल्म रिलिजसँगै हिरोइनले अत्यधिक अंग पदर्शन गरेको आरोपमात्रै लागेन, संवाद पनि अश्लील भएको भन्दै प्रशासनले प्रदर्शनमै रोक लगायो। आफ्नो छरपष्ट जवानी पर्दामा प्रस्तुत गर्ने सपना तुहिएपछि अहिले उनी म्युजिक भिडियोमा सौन्दर्य खर्चिंदै छिन्। यसले उनलाई फाइदै भएको छ भन्नेहरू धेरै छन्। कलाकारले फिल्ममै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने छैन। म्युजिक भिडियोबाट पनि अभिनयको प्यास मेट्न सकिन्छ। पछिल्लो समय त यसमा दामसमेत रामै्र छ भन्नेहरू धेरै छन्।
एकैचोटि पाँचवटा भिडियो
छोटो समयमा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि अचेल अभिनेत्रीहरू म्युजिक भिडियोतिर तानिएका छन्। भिडियो निर्माता पनि के कम? एउटै व्यवस्थापनमा धेरै भिडियो सकाएर बजेट घटाउन थालेका छन्। अघिल्लो हप्ता अभिनेत्री खुश्बु...
दोस्रो संविधानसभाका लागि जनताले अभिमत प्रकट गर्न अब केही दिनमात्र बाँकी छ। संविधानसभा निर्वाचनको विपक्षमा रहेकाहरूले यसलाई बिथोल्न गरेको प्रयास पूर्णतः विफल भएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको निकै पछिसम्म...